I-China Butt Lifter Panties Tummy Control Slimming Body Shaper Control Panty Sexy Lace Womens Umpheme weShapewear oomatshini kunye nabathengisi | Yiyun
Ibhanti engafakwanga enganyuswanga
I-Butt Lifter Panties Tummy control Slimming Body Shaper Control Panty Sexy Lace Womens Isithuba esiphakamileyo seSinqe
Ilaphu yipateni ethambileyo kunye ne-silky. Isinqe esinqeni sesileyiti sibambe ongezantsi. Ifayibha enokuphefumla kakhulu, ithambile kwaye ikhululekile. Umsebenzi omkhulu kunye nayo yonke into ukusuka kwi-top-fit ​​tops kunye neebhatyi ukuya kwi-slim cut jeans.
Abafazi ababhengeza i-Lace ye-Hemline yeLight emnyama Ukulawula iPanty
Iingxowa zokuchasa (ipakethe enye nganye ibhulukhwe)
1. Iibhone zeNtsimbi ezi-4, Akukho lutshintsho, Akukho kuqengqeleka phezulu
2. Uyilo oluphezulu lweSinqe, Nika isisu kunye nokulawulwa kweSinqe
3. I-Hip Enhancer kunye nomlenze weSlim
I-4.Womens Slimming Panty
I-5.Tummy Control & Butt Lifter & Lifter Bottocks Panty kunye neWist ephezulu
I-6.Womens ephezulu yeWindows Lace Shaper
Nasiphi na isampulu esinokubonelela ngayo, umrhumo uya kubuyiselwa kuwe emva komyalelo
ngexabiso eliphantsi, ungaqhagamshelana nathi.
Iintsuku ezingama-2-5 zokusebenza emva kokuba intlawulo yenziwe
I-PayPal, umanyano lwaseNtshona, igrama yemali, T / T
Ukuthetha (i-DHL / Fedex / UPS), Ukuhamba ngenqwelomoya, ukuhamba koLwandle
Intshona Melika, iYurophu, iMbindi Mpuma, uMzantsi Merika, iAsia, iAfrika, iOstreliya njl
1. 100% Ukoneliseka komgangatho okuqinisekisiweyo.
2. Yonke imibala, ubungakanani, uyilo lunokuhlelwa ngokweemfuno zakho okanye iisampuli.
3. Nikezela ngesakhelo sokupakisha i-OEM yasimahla kunye nokupakishwa kwebhokisi yasimahla yokunyusa kwakho.
4. Unokufumana impendulo ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
I-YIYUN ephezulu ye-wist butter lifter ene-tummy Control sharper yenziwa ngezinto eziphezulu eziphezulu, iipesenti zenayir kunye ne-15 pesenti spandex.Ikuphefumla, ukuphefumla, ukudutyulwa imini yonke.
Le YIYUN Ihempe unayo Uyilo olu-smart, olushiya indawo eyaneleyo i-butt yakho kwaye iyakwazi nokuthoba i-hip ngokufanelekileyo, ungakhathaleli ukuba luya kuyicinezela i-hip kwaye nayo iya kunika isigqubuthelo esipheleleyo kwi-butt yakho, emva koko ikwenze ube nokuzithemba ngakumbi kubomi bakho bemihla ngemihla.
Ulawulo lwe-YIYUN tummy & i-butt lifter briefs panties, kunye nemizobo ye-3D-hips, ukuphucula imeko ye-buttock droop flat, iya kukunceda wakhe ii-peach hips, ukunceda i-butt yakho ibonakale intle kwaye iyimpompo.
Le Lingerie engenamthungo yabasetyhini ayiliyilo lokuthunga, ayibonakali phantsi kwalo naluphi na uhlobo lweengubo.
Ungayinxiba kwiiyure ezingama-24, eziethe-ethe, ezi-sexy kunye nezemfashini, kunye nezithambekileyo kunye nezithambileyo. I-100% ye-gusset yekotoni, enempilo, enokuphefumla kwaye ikhululekile ukunxiba.
Ayibonakali kwaphela, i-ultra-soft and comfy, ifanelekile njengolunye ulusu lwakho.
Isaphetha esiphakamileyo esibhinqileyo esibhinqileyo I-Butt Lifter Tummy Control Shapermint Abdomen Slimming Panty Body Shaper Umqeqeshi ojijileyo Amathanga ancipha I-Eleonic Elesticity yangaphantsi ye-lingerie yabasetyhini. Isambatho se-panty esiphakamileyo sikunika uxinzelelo olwaneleyo, kodwa awuyi kuziva uthintelwe, isinyithi sithambile kwaye sibusekele kakhulu.ukuyivayo, ungaziva ukhululekile, ungabinayo imini yonke.
Isuti yomzimba iya kubonisa ukuzithemba kunye nokubumba umzimba wakho o-sexy.
Uyilo lweLaptop: I-ventilation ye-honeycomb.Ukuphazamiseka, ulusu ulusu njengolusu lwakho lwesibini.
Ukuba uneemfuno, akunandaba nokuba yi-bra okanye yeempahla, sigqirha. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
Kutheni usikhetha？ Nje uzinzo kakhulu kwaye unikezela ngokukhawuleza.
Sinomgangatho omkhulu weempahla esitokhweni, u-whick usenza ukuba sifezekise ngokukhawuleza ukuhanjiswa kwegama, kwaye asizukubeka umda wokuphulukana nobunyani babathengi bethu.wakhe ukuthembela ngokwenyani komthengi wethu kunye nathi.Ukuba unayo Sifuna ukuPhuhlisa iimarike ezintsha, Siya kusebenzisana nathi ngokunyaniseka, sikunikeze eyona mveliso isemgangathweni kunye neyona intsha.
Ke uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi, ukuphumelela.
I-OEM / ODM, uyilo olwenziweyo lwamkelekile.
Nceda usithumelele i-imeyile ukuba unayo nayiphi na imibuzo, siya kukuphendula ngaphakathi kweiyure ezingama-24.
Silwela inkonzo yeenkwenkwezi ezi-5 ngokubeka phambili imigaqo-nkqubo yethu, inqanaba lokuhambisa kunye nokuhamba kwethu rhoqo.
Siza kuzama konke okusemandleni ukusombulula ingxaki yakho kunye nokuhlangabezana nesidingo sakho. .Usebenziso luzakuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24 (ngeempelaveki azifakwanga)
Nawuphi na umbuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, siya kusombulula ngokukhawuleza.
1.ExpressShipping by DHL / UPS / Fedex / TNT / EMS / Citylink etc nge-Door to Door service.Delivery
ixesha lithatha iintsuku zokusebenza eziyi-3-7.
I-2.Airfreight: Ukuhanjiswa kwexesha kuthatha malunga neentsuku ezi-2-5 zomsebenzi.
I-3.Other Freight: Ukuhanjiswa kwexesha kuthatha malunga neentsuku eziyi-10- 40 zomsebenzi.
4. Sizikhethele okanye usilungiselele ukuhanjiswa ngenqanawa ngexesha elifanelekileyo.
1. Umgangatho Uqinisekisiwe:
Ukoneliseka komgangatho we-100% okuqinisekisiweyo, konke ukuthunyelwa kuya kutshekishwa ngokungqongqo ngaphambi kokuba kuthunyelwe.
Ukubonelelwa kwexesha elide kunye nokuzinza kwalo lonke uhlobo lweempahla kunye ne-bra.OEM / ODM. Uyilo oluqhelekileyo
Nikeza uyilo lokupakisha simahla kunye nezinto zokuthengisa zentengiso yakho.
Umzi mveliso wase China unikezela ngokuthe ngqo ukuhanjiswa ngokukhawuleza.
Ukucacisa (i-DHL / i-UPS / i-Fedex / i-TNT / i-EMS / i-Citylink), Ukuhanjiswa kweenqwelo moya, ukuhambisa ulwandle njl.
Ndiyakuqinisekisa ukuba yenkonzo yokumisa-nye ngokukhawuleza, eyisebenzayo yokuthengisa ngaphambi kokuthengisa, ukuvelisa, uyilo, uLawulo lomgangatho, ukupakisha,
Ukuhambisa, emva kwenkonzo yentengiso.
Q1. Ngaba ungumzi-mveliso okanye inkampani yokurhweba?
A: Siyingcali ye-proferiorctory Kwimveliso yangaphantsi yabasetyhini engaphezulu kwe-bra engabonakaliyo, iipaneli ezi-shaper, isiciko se-nipple njl.
Q2. Ndingazifumana njani iisampulu?
A: Sisoloko sinika iisampulu kubathengi bethu besiqhelo.Ukuba umtsha, sikunikezela ngesampulu yasimahla, kodwa kufuneka uhlawule kuphela iindleko zekhuriya
Q3. Ungandinika elona xabiso lelona?
A: Ewe siyakwazi, uthenga iimpahla ezivela kumzi-mveliso wethu ngqo.Sizimisele ukuba nobudlelwane bexesha elide kunye nawe kwaye sikunike ixabiso elincomekayo.
Q4. Ndiyikhusela njani i-odolo yam?
A: SinoQinisekiso loRhwebo lwakho, oluqinisekisa ukuba iodolo yakho ikumgangatho olungileyo kwaye ikufikelela ngexesha elifanelekileyo. IsiQinisekiso soRhwebo sinokukukhusela i-oda yakho kwaye ungakhathazeki ngayo.
Q5. Ndingayifaka ilogo yam yoyilo kwizinto?
A: Ngokuqinisekileyo, sinokubeka uphawu lwakho kwimiyilo yethu okanye naziphi na izinto esinokuthi senze uphawu ngokudlulisela ubushushu, isikrini
ukuprinta, ukushicilela kwe-silicon, kunye ne-rubbentina embroiderede Kufuneka nje ifayile ye-logo ye-vector Al.
Q6. Ngaba usebenza nohlobo oluthile olukhulu?
A: Ewe sisebenza ngeimpawu ezininzi ezinkulu e-Australia, e-USA nase-UK njalo njalo.
Q7. Yithini imigaqo yentlawulo?
A: Intlawulo yethu
Iiermerms ziT / T Paypal Credit yemoto, ukukhangela i-e
Q8. Ulawula njani umgangatho wemveliso?
A: SineCandelo le-QA kunye ne-QC kwaye zonke iimveliso ziya kuhlolwa iipesenti ezingama-100 ngaphambi kokupakisha .Ungathumela iqela lakho le-QC okanye ucele iqela lesithathu ukuba lihlole iimveliso ngaphambi kokuba sithumele.
Edlulileyo: Amanenekazi angama-2020 amaLokhi aSebenzisa iiwotshi eziVulekileyo eziVulekileyo esiSinqeni
IBr Exender Maidenform
I-Shtwear yengubo yangaphantsi
I-Postpartum body Shaper
Isitshizi ngeButt Lifter
I-Shapewear Leggings Isinqe esiphezulu
I-Shapewear Lingerie yabasetyhini
Shapewear Women Tummy uLawulo
Ulawulo lweTummy Panty
Abasetyhini abadala be-sexy esinqeni sokulawula isisu ...
I-Butt yokuphakamisa i-panties ithwala i-buttocks tummy contr ...
Ubungakanani beLace Trim yeBritish Tight Butter Lift P ...
Ababhinqileyo ukulawula ukuhambisa iimpahla
Ukuthengiswa okushushu kweAmazon kunye nosayizi oPhezulu we-Butter Lifte Lifte ...
Igridi yeenyosi encinci yeTyhubhu yesiBanga seThupha ...